အလုပ်ရှုပ်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » My Dear Diary » အလုပ်ရှုပ်သူ
Posted by ဇီဇီ on Nov 20, 2012 in My Dear Diary, Society & Lifestyle | 46 comments
မိုးမိုး သီချင်းမဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ဘယ်လောက် အလုပ်ရှုပ်ကြောင်း ကြွားမလို့။ အမှန်တော့ အရှုပ်လုပ်သူ ဖြစ်နေတာရယ်။ :harr:
အိမ်ကနေ ရုံးကို သွားတဲ့ လမ်းမှာလည်း Viber တို့၊ Line တို့၊ Whatapps တို့၊ Tango တို့က ကိစ္စတွေကလည်းရှင်းရသေး။
အတိတ်က အကြောင်းတွေ တွေးမိလို့ စာလေးရေးပြီး တင်လိုက်ပြီများဆို “နင် အဲဒါတွေ တွေးဖို့ အချိန်တွေပိုပြီး အရမ်း အားနေသလား” ဆိုတဲ့ အပြစ်တင်သံတွေက ကြားရသေး။ သူတို့တွေနဲ့ gathering Plan တွေ၊ shopping ထွက်ချိန်တွေကိုလည်း ရအောင် စဉ် ပေးရသေးတာကို။ :gee:
ရုံးက ပေးမာစတာကြီး ထားပေးထားတဲ့ကျောင်းတစ်ဖက်နဲ့ စာတွေကလည်း ကျက်ရသေး။
ကဲ ဒီလောက် ကွန်ပြူတာနဲ့တီဗီ နဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ မျက်နှာမခွါနိုင်ဖြစ်နေတာ…….၊ ဘယ်မလဲ အချိန်ပို??? ဟင် ….?? :eee:
အေးဗျာ .. ဂလောက် အဆက်မပြတ်လေ့လာကြိုးကုပ်နေတာတောင် မေတန်းနု ဆုံးတဲ့ သတင်း
မသိတာ အံ့ပါရဲ့ …။
အဲဒါ ညည်းအကြောင်း သိသားနဲ့ကို ကျုပ်က သတိလစ်သွားလို့ပါလေ။
နာ့မှာ မနေ့က …၀ါးတီးဆွဲကောင်းနေတုန်း …သံယောဇဉ်မပြတ်လို့ အွန်လိုင်းလေး ဖွင့်မိပါတယ် … မိဂီလက်ချက်မိတွားတယ် …. ညည်းတော့ … နေပေ့စေဦး …. တွေ့ဦးမယ်
ဘယ်လောက်လွတ်တုန်းဆို ဘေးနားက သူငယ်ချင်းကို ဝမ်းနည်းပက်လက်ပြောမိသွားတယ်။
တကယ် ဆုံးသွားတာလေဗျာ ..ကျုပ်ကပဲ မဟုတ်မဟတ် ပြောသလိုလိုနဲ့..
ဟားဟား။ ညည်းက တော့လေ။ အေးပါ။ ထားပါ။ လူကြားထဲ ပြောပါနဲ့တော့။ :harr:
ဟုတ်တယ် မမရဲ့ .. ညီမလည်း အဖြစ်တူတယ် … သတိလွတ်သွားလို့ ခံလိုက်ရတယ် …. ။ မနေ့က ဒင်နာစားနေတုန်း ၊ စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ ဘေးက လူတွေကိုပြောပြတော့ ..ဟာတေ၊ွ ဟင်တွေ ဖြစ်ကုန်ကြတယ် ။ နှမျောတောင် နှမျောနေသေးတယ် ……. ပြီးမှ ဂီစိန်မ လက်ချက်မှန်းသိတယ် ။
အပွေးညင် အပင်တိ … ဒါမျိုးဆို ပလော်ဖက်ချင်နယ် ထင်ပါရဲ့ ခစ်ခစ် ။
ဟုတ်တယ် … ဟုတ်တယ် …. ဒီနေ့ရုံးရောက်ကတည်းက မအားမလပ် ချာချာလည်နေတာကို သူပြောတဲ့သတင်းကို အဟုတ်မှတ်လို့ သူများတွေကို အလုပ်တဖက် အပြင်သွားခါနီးဖွမိတယ် … နောက်တော့ သူက သူ့မိန်းမမဆင့် ဟိုဟာဆုံးတာကို ကြော်ငြာသွားတာကို …… မဆင့်ဆုံးသွားတော့ မနက်ဖြန် မောင်မောင်ဂီနဲ့မင်္ဂလာဆောင်တော့မယ်တဲ့ ……. ဒါမှ သူ့ကို ကျုပ်သမီးနဲ့သားကိုတော်ချင်တဲ့ ခမည်းခမက်စာရင်းကနေ ပါယ်လို့ရမှာ …..
မမဇာရေ နာနာလေးသာဆော်ပါဗျို့ … အဲဒီမောင်မောင်ဂီကို …….
သူ့တော့ ဘယ်သူမှ နိုင်မယ်မထင်ပေါင် ခိုင်ခိုင်ရယ်။
ဟုတ်ပါဘူး WOW ရယ်။ ဒီမအားတဲ့ကြားထဲ အချိန်ပေးရတဲ့သူရှိပါသေးရဲ့။
အဟီး..အမွန်က ပြောမလို့တော့… တစ်စုံတစ်ယောက်အတွက်တော့ အချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးပေါ့လို့…
ဒါနဲ့များ ဦးကြောင်ကြီးအကြောင်း တွေးနေချိန် ရှိတယ်နော်.. ဒဂယ်ခြစ်တယ်ဆိုဒါ ယုန်သွားပါပြီဗျာ….။ :harr:
အံမယ် အံမယ် အပေးအယူတွေတည့်လို့ သူတို့က သူတို့က စ် ။
ဒီ ကြောင်ကို လည်း တု မပြောနိုင်လို့ လွှတ်ထားရတာပါလေ။
အွန် ..ကျုပ်တို့ ကိုကိုကြောင်တို့ကပဲ လူဇိုးရီးတွေကျလို့
တကယ်တော့ ကျနော်နဲ့ ကိုကိုကြောင်ဟာ
လွှတ်တော်ရောက်၊ ဟိုပြောဒီပြော ပြောချင်ရာပြော
ပြီးတော့ကားပေါ်ပြန်တက်၊ ရွှေတိဂုံဘုရားရောက် အပြေးအလွှားဘုရားဖူး
ပြန်ဆင်း၊ ကားပေါ်ပြန်တက်၊ ဒီချုပ်အိမ်ရောက် ၊ ဟိုရှင်းဒီရှင်း၊ ကားပေါ်ပြန်တက်
ဘွဲနှင်းသဘင်ခန်းမပြေး၊ စင်ပေါ်အပြေးအလွှားတက်၊ ဘာညာကွီကွပြော၊ ပြန်ထွက်
လေဆိပ်ရောက်၊ လေယာဉ်ပေါ်အပြေးအလွှားတက် လက်ပြနှုတ်ဆက်
အားကိုမအားရှာပါဘူး။ အေးအေးဆေးဆေး ဘီယာဆိုင်လေးတောင်ထိုင်မသွားနိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်တိုင် အလုပ်ရှုပ်ရတာ မောဘူးဗျ။
မနေ့က သူ့ကို ကြည့်ပြီးတော့ မောတယ်။
အလုပ်ရှုပ်တဲ့အကြောင်းဆိုလျှင် ကြားတောင်မကြားချင်လောက်အောင်ပါပဲ ။
တာဝန်သိစိတ်ဆိုတဲ့ ဖီလင်ကြီးက သံမှိုစွဲနေတာနဲ့ …. ခိုင်းကောင်းတဲ့ နွား နှစ်လယ်ထွန်ရတဲ့ အဖြစ်ရယ် ။
တစ်ခါတလေများဆိုလျှင် ၊ နာမည်သာ ဆိုးပါစေ .. အချောင်ခို ရေသာလိုက် နောက်လိုက် အဖြစ်နဲ့သာ နေလိုက်ချင်ပါတော့တယ် ။ စိတ်ကသာ ကြံဖြစ်တာ .. တကယ်နေနိုင်လားဆိုတော့လည်း ဟုတ်ဘူးပဲ … ဒီတော့… ရုန်းစမ်းဟဲ့ နှစ်လယ်လို့ပဲ .. ကိုယ့်ကိုယ်ကို အားပေးရင်း .. ရင်မောစရာ မနက်ဖြန်များစွာကို တိုက်ဖျက်နေရပါတယ် … ။ အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်လို့ ဘော်လီဘော ပုတ်တဲ့ ကိစ္စတွေကြောင့် …ဒီရက်ပိုင်း ဖီလင်နည်းနည်းငုတ်နေတယ်အစ်မရယ် …
မမခိုင်ဇာကဖြင့် .. အလုပ်ရှုပ်တာတောင် .. ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန်တွေအတွက် ရှုပ်ခွင့်ရှိတာမျိုးမို့ ..ဂလိုအလုပ်ရှုပ်တာကိုတော့ အားကျမိပါဧ။် … ဟီး
Etone ရေ။ (ဟီး။ ဒီတစ်ခါ မှန်အောင်ခေါ်နိုင်ပြီ ထင်ရဲ့။) :harr:
အစ်မမှာ အကျင့်ဆိုး တစ်ခုရှိပါတယ်။ ဘယ်လောက် အလုပ်များများ ကိုယ့် ကိုယ်ပိုင် အချိန်၊ ကိုယ့် စိတ်ပျော်ရာ အလုပ်လေးလုပ်ဖို့
အချိန်က ရသလောက် ကပ်သပ်ယူပါတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကြိုက်ရာ ကြိုက်ရာ လေးများနဲ့ အနားပေးပါတယ်။ ဒါမှ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာပါ။
အစ်မ ရဲ့ အချိန်နဲ့ Energy ကို ယူသုံးချင်တဲ့ လူမျိုး ( Boss အပါအဝင် ခု အစ်မ နားက လူတွေ အကုန်နီးပါး) ကတော့ ဒီ အကြောင်းကို သဘောပေါက်လို့ လွှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒီ အခြေအနေ မရောက်ခင် အရင် ၅ နှစ်ကာလ ကတော့ ပြန်မပြောတော့ပါဘူး။
တာဝန်ယူတတ်တဲ့ စိတ်ကိုတော့ အားပေးပါတယ် ညီမလေး။ ပင်ပန်းပေမဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်မဲ့ စိတ်မို့ပါ။
ဒီစာကတော့ အစ်မ ကို အရမ်းအားနေလားဆိုတဲ့ မေးခွန်းတွေ အတွက် ရွဲ့ ရေးထားတာပါကွယ်။ :hee:
မဟေသီ မဂ္ဂဇင်း စထုတ်ကာစတုန်းက
အနုပညာရှင်တွေရဲ့ တစ်နေ့တာ ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်လေး
မန်းဂဇက်ရဲ့ ဆယ်လဲဗျဲတီး ဒေါ်ခိုင်ဇာ ရဲ့ တစ်နေ့တာ ကို
သူတို့က ပိုက်ပိုက်ရတဲ့ အလုပ်ရှုပ်တာဗျ။
ကျနော်က အရှုပ်လုပ်တယ်လို့ကို အပြောခံရသေး။
တပြိုင်နက် နှစ်လုပ် လုပ်တာတွေပါသေးဘူး။
လက်ချာလိုက်ရင်း ဂိမ်း ဆော့။
အလုပ်လုပ်ရင်းဖေ့ဘုတ် သုံး ။ မယုံရင် ပုံပြင်မှတ်ပါလေ။
အလုပ်တွေ အများကြီးလုပ်ဆောင်နိုင်သူ စွမ်းရည်ရှိသူ မခိုင်ဇာလို့တောင် ကင်းပွန်းတပ်သင့်တယ်နော်။
ကျွန်တော်ကတော့ တစ်ခါတစ်လေလည်း ခေါင်းတောင်မဖော်နိုင်အောင် အလုပ်ရှုပ်နေပြီး တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိအောင် အားနေပြန်ရော။ ဒါပေမယ့် အားနေတယ်ဆိုရင်တော့ အများဆုံးလုပ်ဖြစ်တာရှိတယ် အဲဒါက ရွာထဲသို့ဝင်လည်လိုက်တာဘဲဗျာ။
မအားလည်း ကိုယ်လုပ်ချင်တာလေး လုပ်လိုက်ရမှ။
ခု ဂေဇက်ထဲ ဝင်မိတော့ ပိုဆိုး။ အပြင်သွားရတာ စိတ်မဖြောင့်၊ အစည်းအဝေးဆိုရင်လည်း ဖုန်းလေးတကိုင်ကိုင် ဖြစ်နေတာ။
ဒီ စွဲလမ်းစိတ်လေး ဖျောက်ရဦးမယ်။ ကျနော် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသတိပေးပြီး မလိုက်နာနိုင်သေးဘူး။ :hee:
ဖတ်ရင်း မောသွားလို့ဘီအီး တစ်စိတ်လောက် သွားဂလုလိုက်ဦးမဗျာ
အင်း။ ဗိုက်ဗိုက် သတိပေးမှ ပဲ အသောက်အစား အတွက် ပေးရတဲ့ အချိန်တွေ ကျန်ခဲ့ပါပေါ့လား။
သူများတွေက သိပ်အလုပ်မရှုပ်သေးပါဘူးဆိုပြီး အထင်သေးကြတော့မယ်။ :harr:
အချိန်တွေကို အကွက်စေ့စေ့ ကောင်းကောင်း အသုံးချနိုင်တဲ့ ‘ဆွိ’ ပါလား…. :harr:
ရွဲ့ ပြောသလား နှင်းနှင်းနဲ့ ညီမလေး နန်းတော်ရာသူရယ်။
မရွဲ့ရပါ..စောင်းပြောနေခြင်းလို့ပဲ မှတ်လိုက မှတ်ပါ…
ကိုယ့်ဟာကိုယ် တစ်နေ့တာလုံး အချိန်ကို အသုံးချပုံ လက် ၅ချောင်းတောင်
မပြည့်သမို့ အတည်ပြောပြီး ချီးကျူးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကွယ်…
အော် .. အေး .. အဲ …
ဂယ် အလုပ်ရှုပ်ဒဲ့ လူဂျီးဘဲနော် …
အနော်ဒို့နဲ့တော့ နည်းနည်းတူဒယ် ..
အဲ .. မတူဒါဂဒေါ့ အင်တာနက် ကိုးနတ်ရှင်ဘဲဂျ ..
ဒီမှာက အိုက်မှာလို ဟုတ်ဘူးးးးး
တိဒယ်။ တိဒယ်။ မောင်အံချာဒုံး အလုပ်ချုပ်မှန်းလည်း တိဒယ်။
(ဒီကလေးနောက်လိုက်ပြီး စကားတွေလည်း မပီချင်တော့ဘူး)
ကိုးနက်ရှင်မကောင်းတဲ့ ကြားက အလုပ်ရှုပ်နိုင်တာဆိုတော့ မောင်အံစာက ပိုတော်တယ်။ :harr:
မဆွိက အလုပ်ရှုပ်နေတာလား ။
အနော်ကတော့ အိပ်ရေးတွေပျက်နေတာ ခုတလော ညညဆို တခုခုဆို လန့်နိုးနေတတ်တာ ငလျင်လှုပ်ပြီးကတည်းက ဂယောင်ချောက်ခြားတွေကို ဖြစ်လို့
မနေ့ည ၁၂ နာရီ ထိုးခါနီးလေးလည်း ငလျင်က ပုခက်လွှဲသလို ထပ်လှုပ်ရော ဘာပြောကောင်းမလဲ အောက်ကို ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းကို မသိဘူး ။ ဒူးတွေကို တုန်နေတာပဲ။ ခဏနေတော့ ဟိုဘက်အိမ်ကို နှစ်သစ်ကူးသီချင်းတွေ လာဆို တော့ ဂစ်တာသံတွေ ကြားပြီး လန့်နိုးပြန်ရော။
မနက် ၅ နာရီကျ လမ်းလျှောက်ရမှာမို့ ထရပြန်ရော ။ အခု ပန်ဒါမျက်ဝန်းဖြစ်နေလို့ ။ လူကလည်း ကြောင်စီစီဖြစ်နေတယ် ။ မနက်ကလည်း အိမ်မှာ ပယ်ပယ်နယ်နယ် အဆူခံလိုက်ရတယ် ။
Blue days ပါ မဆွိရယ်
အပု၊ အစ်မ ကို ပြန်မလာရဲအောင် မပြောပါနဲ့ကွယ်။
မန်းလေးမှာ နေရတာ ကျန်တာပျော်သလောက် ငလျင်နဲ့ မီးလန့်တာကို အရမ်းလန့်တတ်လို့ပါ။
စိတ်လျှော့ပါ အပုလေး။ မိသားစုနဲ့နေရတာပဲလေနော်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပျော်စရာပါ။
သူတို့တွေ လူစုပြီးသွားစားတိုင်း ဓာတ်ပုံတွေကြည့်ပြီး ဒီမှာ မနာလိုလည်း ဖြစ်ရတယ်။
အိုက်ဒါကြောဒါပေါ့ ဂျီးဒေါ်ပုခ်ျရယ် …
ဟိုဒင်း မရှိဒဲ့ အမျိုးသမီးဟာ မတင့်တယ်ဘူးလို့ ..
အဟိ .. (ဆိုင်လားဒေါ့ သိဝူးးး)
အပုလေး နားမယောင်ပါနဲ့နော်။ ပညာနဲ့ ကိုယ့်ကျင့်တရားပြည့်တဲ့ မိန်းမ က သူပြောတဲ့ ဟိုဒင်းမရှိလည်း တင့်တယ် ပါတယ်လေ။ :harr: :harr:
ငှက်ပျောပင်တော့ စိုက်ထားတယ် ပြောတာပဲ
ဟယ်။ သူများကို ပြောပြန်ပြီ။
နာ့ ညီမလေးက မလိုဘူး။ သူများတွေ အတွက် စိုက်တာနေမှာ။
အရှေ့ကျွန်းက စိတ်ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ အူးလေးတယောက်အတွက် လက်ဆောင်ပေးရအောင် စိုက်ထားပေးတာပါ မဆွိ
ဘယ်ကြိုက်မလဲ အိုဘားမားက အသားမဲသကိုး။
ဟုတ်ပါဘူးလေ။ မနှိုင်းကောင်း နှိုင်းကောင်း လူကြီးများနဲ့ နှိုင်းလို့ ပြောတာပါ။
အမှန်တော့ အရမ်း အားနေတာရယ်။ ရွာထဲ ဟိုအိမ်ဝင် ဒီအိမ်ထွက်နဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိပ်ကြည့်မရတော့ဘူး။
ပဒိုင်းသီးဘဝ ……. မဟုတ်လို့ တော်သေးဗျာ
အဲလို ဆိုတော့လည်း တစ်မျိုးထပ်ကြံရမှာပေါ့ ကိုဆာမိရယ်။